KMF/Cnoe – Covid-19: “Mila lanjalanjaina ny fepetra “ | NewsMada
“Misy fepetra apetraka tokony ho voalanjalanja tsara ary tokony hohajain’ny tany ama-monina rehefa mifandraika sy mahakasika amin’ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ny momba ny hamehana ara-pahasalamana” hoy filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina. Mbola adihevitra ataon’ny olona, ohatra, ny hoe: fihibohana tanteraka sa tsia ny asabotsy sy ny alahady ho an’Analamanga fa samy manana ny hoe fihibohana tanteraka aminy.
“Hoy izahay hoe: manao izay afany ny fitondrana fa manao izay afany koa ny fiarahamonina”, hoy izy. Satria aoka tsy hohadinoina fa raha manan-katao avokoa ny rehetra: ny andro zoma no mividy entana sy manomana ny sakafo ny andro asabotsy sy alahady, ary mihiboka tanteraka ny asabotsy sy alahady.
“Inona moa ny hataontsika ho an’ireo olona tsy mahaangom-bola hividianana sakafo hatao ny andro asabotsy sy alahady fa ny hohanina anio, tadiavina anio”, hoy izy. Ny an’ny sasany aza, ny hohanaina anio, tadiavina rahampitso fa natao trosa. Inona ny hatao momba izany? Izany rehetra izany, tsy maintsy lanjalanjaina sy heverina tsara. Heveriny fa manana adidy aman’andraikitra goavana amin’izany ny fitondram-panjakana hamaha olana bebe kokoa.